Madaxweynaha dowlada Puntland oo la kulmay safiirka Isutaga Imaaraatka Carabta u fadhiya Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowlada Puntland oo la kulmay safiirka Isutaga Imaaraatka Carabta u fadhiya Soomaaliya
August 5, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland iyo safiirka Imaaraatka oo isa salaamaya. Sawirka: xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kulan la qaatay safiirka Isutaga Imaaraatka Carabta u fadhiya dalka Soomaaliya Maxamed Al-Cutmaani.
Kulanka ayaa ka dhacay xarunta safaarada Imaaraatka ay ku leeyihiin caasimada Soomaaliya, Muqdisho.
Waxaa Madaxweynaha kala qaybgalay kulanka guddoomiye ku-xigeenka kowaad ee baarlamaanka Puntland Cabdixamiid Shiikh Cabdisalaam.
Labada dhinac ayaa kawada hadlay xiriirka u dhaxeeya dowlada Puntland iyo dalka Isutaga Imaaraatka Carabta, waxaana la isku waafaqay in la xoojiyo xiriirka ganacsi iyo nabadgelyo ee ka dhaxeeya Puntland iyo Isutaga Imaaraatka Carabta.
Isutaga Imaaraatka Carabta ayaa bixiya dhaqaalaha ku baxa ciidamada la dagaalanka burcadbadeeda Puntland ee PMPF, kuwaasoo kaalin weyn ka geystay la dagaalankii burcadbadeeda ka howlgali jirtay xeebaha Puntland.
September 21, 2016 Doorashadii guddoomiyaha degmada Dangorayo oo mar labaad fashilmatay, maxaa sabab u ah?
October 2, 2016 Madaxweynaha dowlada Puntland oo la kulmay wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya
Dagaalyahan katirsan Daacish oo isku dhiibay Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaalyahan katirsan kooxda Daacish ayaa isku dhiibay ciidamada Puntland, sida maanta oo Talaado ah ay ku warantay idaacada VOA qaybteeda Soomaaliga, oo soo xiganaysa sarkaal Puntland ah. Ninka isa soo dhiibay ayaa la [...]